Vovoka Urolithin A tsara indrindra (1143-70-0) - Mpanamboatra sy ozinina
Cofttek no mpanamboatra vovoka Urolithin A tsara indrindra any Shina. Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana famokarana tanteraka (ISO9001 & ISO14001), miaraka amina famokarana isam-bolana 400kg.
Urolithin vovoka famaritana
Anarana simika: 3,8-Dihydroxybenzo [C] chromen-6-ny iray
Formula simika: C13H8O4
Meny fitetezana 228.2
Color: Fotsy amin'ny vovo-fotsy tsy fotsy
Key InChi: RIUPLDUFZCXCHM-UHFFFAOYSA-N
Kaody SMILES: O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=C(O1)C=C(O)C=C3
function: Urolithin A, ny metabolita-tsinay mikraoba-asidra ellagic asidra mana-tavy manohitra aretina mahavonto, antiproliferatif, ary antioxidant. Urolithin A mamporisika ny autophagy sy apoptosis, manakana ny fitomboan'ny fihodinan'ny sela ary mampiato ny synt synt DNA.
fampiharana: Urolithin A dia metabolitin'ny ellagitannin; Mpanelanelana amin'ny laoniny
Solubility: Soluble ao amin'ny DMSO (3 mg / mL).
Urolithin A Spectrum NMR
(1) Afaka manitatra ny androm-piainany
Urolithin: Mamporisika ny mitophagy amin'ny alàlan'ny fanesorana ny mitochondria simba. Izany koa miantoka ny fanodikodinana mitochondria ho an'ny fiasa mety indrindra. Mitochondria matetika simba miaraka amin'ny fahanterana ary koa noho ny adin-tsaina. Ny fanesorana mitochondria simba dia manana anjara toerana amin'ny fanitarana ny aina.
Ao amin'ny fandinihana ny kankana, urolithin Famenon-dronono iray tantanana amin'ny 50 µM avy amin'ny atody atody mandra-pahafatin'ny nahafaty azy ireo hanitatra ny haben'ny 45.4%.
Tamin'ny fanadihadiana iray hafa natao tamin'ny taona 2019 tamin'ny alàlan'ny fibroblast avy amin'ny olombelona, ​​dia hita ny famenony urolithin A mba hampisehoana ny mety ho fanoherana ny fahanterana. Izy io dia afaka nampitombo ny fitenenana collagen karazana 1 ary koa nampihena ny fitenin'ny matrix metalloproteinase 1.
Fandinihana olona kely koa dia mampiseho fa nahavita nanatsara ny fiasa mitochondrial sy ny fahasalaman'ny skeletal ho an'ny zokiolona ny UA rehefa nitantana am-bava amin'ny 500-1000mg mandritra ny efatra herinandro.
(2) Manampy amin'ny fisorohana homamiadan'ny prostaty
Ny urolithins sy ireo mpialoha lalana, ellagitannins dia manana fananana anti-homamiadana. Izy ireo dia afaka manakana ny fihanaky ny homamiadana amin'ny sela amin'ny alàlan'ny fisamborana ny fihodinan'ny sela ary ny famporisihana ny apoptose. Apoptosis dia manondro sela maty voapetraka izay manafoanan'ny vatana ny sela mety homamiadana sy sela hafa voan'ny aretina.
Ao amin'ny fandinihana ny totozy voan'ny tsina homamiadana, ny ellagitannins metabolites (Urolithin A) dia hita fa manakana ny fitomboan'ny homamiadana. Ny fandalinana dia nitatitra bebe kokoa ny fifangaroan'ireo metabolisma ao amin'ny glande prostate, colon sy ny taovolon'ny tsinay.
(3) Fanatsarana kognitive
I Urolithin A dia afaka miaro ny aretin-kozatra amin'ny fahafatesana ary afaka mitarika ny neurogenesis amin'ny alàlan'ny famantarana anti-inflammatory.
Ao amin'ny fandinihana ny totozy manana alahelo fahatsiarovana, ny urolithin A dia hita fa fanalefahana ny kognitaly ameliorate ary miaro ny neuron amin'ny apoptosis. Midika izany fa ny UA dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretina Alzheimer (AD).
(4) Mety hanoherana ny hatavezina
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny ellagitannins dia afaka manakana ny fiangonan'ny lipid ary koa ny marika adipogenic toy ny proteinina valin'ny fitombon'ny fiakarana alohan'ny fitomboana ary koa ny fanamafisana ny proteinina amin'ny alàlan'ny fisamborana ny fihodinan'ny sela.
Ny urolithin A dia hita manokana mba hanatsarana ny fahatsapana insuline ka io no manakana ny fivoaran'ny hatavezana.
Ao amin'ny fandinihana ny totozy amin'ny fihenan-tsasatra, ny urolithin dia nisy fihenan-kevitra hitazana ny fisorohana ny fihenan-tsakafo ateraky ny sakafo sy ny faharenan'ny metabola amin'ny totozy. Ny fandinihana natao dia nampiseho fa ny fitsaboana UA dia nitombo ny fandaniana angovo, ka izany dia fitambaran'ny vatana.